Ahụike – Page 2 – Igbo Services
Chigo	 Jun 25, 2022 0
Soludo ewepụtala ụlọ ọrụ ikuku oxygen dị nde narị naịra abụọ na Steeti…
Ọka mmụta sayensị na-akpọku NAFDAC ka ha nyochaa ebe nri ngwa ngwa…
Afịrịka Agụmụakwụkwọ Akụkọ na ewuewu Azụmahịa Egwuriegwu ejije na njem nlegharị anya Isiokwu dị mkpa
Ụlọ ọrụ biotech US Moderna ekwupụtala nsonaazụ dị mma maka ọgwụ mgbochi ọhụrụ nke lekwasịrị anya ma ụdị COVID mbụ na Omicron wee hụ ogbunigwe ahụ dị ka onye ndu ya maka onye na-akwalite ọdịda a. A nwalere ọgwụ mgbochi a na-akpọ…
USAID amalitela enye ụlọ ahụike ọkụ eletrik .
Mmemme oku na-eme ihe na-akọwapụta ihe omume ndị ike na ngalaba ahụike nwere ike mejuputa iji mee ka ọkụ eletrik PHC dịkwuo elu, ma na-ama ndị na-eme ihe aka ka ha nweta ngwọta ọkụ eletrik dị ọcha maka 1,000 PHC site na 2023 na ngụkọta…
Mgbasa ozi megide ịba bụ ọgụ mmadụ niile – Soludo.
Aka na-achị Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo akpọkuola Ndi-anambra ka ha sonye n'ọgụ a na-alụso ịba. Soludo mgbe ọ na-ekwu okwu n'emume mwụpụ ọkọlọtọ maka nkesa free Insecticide Treated Net (ITN's), bụ nke e mere n'Awka…
Ọkachamara na-akpọku FG ka o bute ụzọ nlekọta ahụike maka ndị Naijiria.
Otu Prọfesọ nke Othopedic, Lawrence Oginni, akpọkuola gọọmentị etiti Nigeria ka ha bute ụzọ nlekọta ahụike nye ndi Naijiria. Oginni, bụ Prọfesọ na ngalaba ngalaba nke ịwa ahụ ọkpụkpụ na traumatology, n’ Mahadum Obafemi Awolowo…
Dọkịta na-akwa akwa maka enweghị akụrụngwa a ga-eji gwọọ ndị ihe mberede mere.
Dọkịta na ngalaba na-ahụ maka ihe mberede na mberede, Federal Medical Center, Abuja, Dr. Arome Adejo, na-akwa arịrị maka enweghị ngwá ọrụ iji gwọọ ndị ihe mberede ahụ metụtara karịsịa bụ ndị nọ n'ọnọdụ siri ike na ụlọ ọgwụ dị elu…
Ndị nne na steeti Cross River na-erubere isi maka igba ọgwụ mgbochi ụmụaka.
Chigo	 May 26, 2022 0
Dị ka Òtù Na-ahụ Maka Ụmụaka nke Mba Ndị Dị n’Otu, UNICEF si kwuo, na Nigeria, puku ụmụaka atọ na-anwụ kwa ụbọchị n’ihi ọrịa ndị a pụrụ igbochi egbochi. A na-ekwu na ọnụ ọgụgụ a na-atụ egwu na ekwesịrị imekwu ihe gbasara ọgwụ…
Ndị na-eme ihe na-akpọ oku ka isonye na nlekọta ahụike nsọ nwanyị.
Oriakụ Pauline Tallen, Minista na-ahụ maka ụmụ nwanyị na Tabitha Cumi Foundation (TCF), otu NGO akpọọla oku maka itinye ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ nwere nkwarụ na ahụike nsọ na usoro nlekọta ịdị ọcha. Ha kpọrọ oku a na ọzụzụ ụbọchị…
NYSC tinyere ọgwụgwọ ahụike efu n'Ebonyi Community Ụlọ ọrụ National Youth Service Corps NYSC dị n'Ebonyi steeti, amalitela ọrụ nlekọta ahụike n'efu na mpaghara ọchịchị Onicha nke steeti ahụ. Nke a dị na adreesị nke onye nhazi NYSC…